Samsung Health | အက်ပ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ | Samsung Myanmar
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့ Samsung Health နဲ့ မြှင့်တင်လိုက်ပါ
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မနက်ဖြန်အတွက် သင့်ရဲ့အိပ်စက်မှုပုံစံတွေကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ
သင့်အိပ်စက်မှုရဲ့ အလုံးစုံအရည်အသွေးက အိပ်စက်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အိပ်စက်မှုအစီအစဉ်ကို Samsung Health နဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်မြှင့်တင်ကာ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့အိပ်စက်မှုကို တစ်ညလုံး စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး အိပ်စက်နေတာလဲဆိုတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရယူလိုက်ပါ။
သင်အိပ်စက်တဲ့ကြာချိန်၊ အိပ်စက်မှုအဆင့်တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ သင့်ရဲ့အချိန်နဲ့ တစ်ညလုံး သင် ဘယ်လောက်လှုပ်ရှားမှုရှိလဲဆိုတာတွေကို အခြေခံတဲ့ သင့်ရဲ့ အိပ်စက်မှုအမှတ်ကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ သင့်ရဲ့ အလိုက်အထိုက်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပုံကို ကြည့်ဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ နောက်ဆုံးရမှတ်ကို သင်နဲ့ သက်တူရွယ်တူ၊လူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
* Galaxy Fit2၊ Galaxy Watch Active2၊ Galaxy Watch3 နှင့် Galaxy Watch4 စီးရီးများတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်အိပ်စက်နေစဉ် သင့်ရဲ့ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ပမာဏကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုကို အကဲဖြတ်ပါ။
* အထွေထွေ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆေးကုသမှုအခြေအနေ သို့မဟုတ် ရောဂါတစ်စုံတစ်ရာကို စူးစမ်းခြင်း၊ ခွဲခြားစစ်ဆေးခြင်း၊ ကုသခြင်းတွင် အသုံးပြုမှုအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တိုင်းတာမှုများသည် သင်၏ တစ်ကိုယ်ရေကိုးကားမှုအတွက်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အကြံဉာဏ်အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးပါ။
** ရရှိနိုင်မှုသည် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
*** Galaxy Watch4 စီးရီးများတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဟောက်ခြင်းကို ထောက်လှမ်းသိရှိမှုသည် အိပ်စက်နေစဉ် သင့်ထံမှထွက်ပေါ်သော အသံများကို အသံသွင်းကာ မှတ်သားမှု ပြုလုပ်ပါသည်။ သင် ဟောက်နေပါက၊ တစ်ညလုံး မည်မျှကြာအောင် မည်သည့်အချိန်များတွင် ဟောက်နေသည်ကို ရှာဖွေပေးပါလိမ့်မည်။
* အထွေထွေ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ဆေးကုသမှုအခြေအနေ သို့မဟုတ် ရောဂါတစ်စုံတစ်ရာကို စူးစမ်းခြင်း၊ ခွဲခြားစစ်ဆေးခြင်း၊ ကုသခြင်းတွင် အသုံးပြုမှုအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တိုင်းတာမှုများသည် သင်၏ တစ်ကိုယ်ရေကိုးကားမှုအတွက်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အကြံဉာဏ်အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးပါ။
** Galaxy Watch4 စီးရီးများတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
*** သင် ဟောက်နေခြင်းကို အသံသွင်းရန်၊ သင်အိပ်စက်နေစဉ် သင်၏နာရီကိုပတ်ထားကာ သင့်ဖုန်း၏အောက်ခြေကို သင့်ထံဦးတည်ထားလျက်ဖြင့် စားပွဲခုံအပုကဲ့သို့သော သင့်ဦးခေါင်းနှင့်နီးသည့် တည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သင့်ဖုန်းကို ထားရှိပါ။
သင်နှင့်အတူ အမြဲရှိနေမည့် Galaxy နဲ့ ပိုစမတ်ကျတဲ့ဘဝတွင် နေထိုင်လိုက်ပါ။
သင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ
သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ သိမြင်ချက်များကို ရယူပါ။ သင့်ကို စိတ်အားတက်ကြွနေစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန် ကျန်းမာတဲ့ ဘဝရွေးချယ်မှုများကို ပြုလုပ်ရန် သင့် ကိုယ်အလေးချိန်၊ အဆီပမာဏ၊ ကြွက်သားပမာဏနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီရာခိုင်နှုန်းတို့ရှိ အပြောင်းအလဲများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ။
** ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုကို ရရှိနိုင်မှုသည် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပါ
Samsung Health နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးရည်မှန်းချက်တွေကို ကြံ့ခိုင်အောင်လုပ်ပါ။ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ ၎င်းတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်များနဲ့ မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရှိနေစေရန် ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါ။
အဆင့်မြှင့်ပြေးခြင်းမက်ထရစ်များနဲ့ သင့်ရဲ့ အပြေးလေးကျင့်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ပါ
စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ကာ သင့်ရဲ့ အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်း ရည်မှန်းချက်များကိုထိန်းထားရန် သင်၏ အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်း ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို အကဲဖြတ်ပါ။ ပြေးခြင်းအလေ့အထများကို ခွဲခြားဆန်းစစ်ကာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို တားဆီးရန်အတွက် နှစ်ဖက်မတူညီမှု၊ ထိစပ်ချိန်၊ ထိစပ်မှုမရှိချိန်နှင့် ထောင်လိုက် အတက်အကျဖြစ်ပေါ်မှုကဲ့သို့သော အရေးကြီးသည့်မက်ထရစ်များကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ပါ။
* အဆင့်မြှင့်ပြေးခြင်းမက်ထရစ်များကို Galaxy Watch Active2၊ Galaxy Watch3 နှင့် Galaxy Watch4 စီးရီးများတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Samsung Health နဲ့ သင့်နေ့စဉ် အစားအသောက်တွေ၊ မုန့်သရေစာတွေကို မှတ်တမ်းတင်ရင်း ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်စားသောက်ပုံ အလေ့အကျင့်တွေကို ဖန်တီးပါ။ တစ်နေ့တာအတွင်း သင့်ရဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရ စားသုံးမှုပေါ် မူတည်ပြီး ပို၍ကောင်းစွာဟန်ချက်ညီတဲ့ သင့်ရဲ့ စားသောက်ပုံ အလေ့အကျင့်သို့ ခြေလှမ်းလိုက်ပါ။
အိမ်မှာရှိတဲ့ နေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို ရိုးအီနေပြီလား။ Samsung Health က အညောင်းဆန့်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့တာ၊ ခံနိုင်ရည်လေ့ကျင့်တာနဲ့ တခြားအရာတွေ အပါအဝင် ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ပရိုဂရမ်အသစ်တွေ သင်ပေးမယ့် ကျွမ်းကျင်နည်းပညာရှင်တွေရဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ သင့်အတွက်လိုအပ်သလို သင်ယူဖို့ပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် သင့်နာရီထံမှ အချိန်နှင့် တပြေးညီ တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက်ကို ရယူပါ။ ယခု သင်၏ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် ကယ်လိုရီတို့ကို စခရင်ပေါ်တွင် ခြေရာခံနိုင်ပါပြီ။
* Samsung Health မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပရိုဂရမ်ကို ဖွင့်ထားစဉ် Galaxy Watch ကိုပတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာ၊ စိတ်နှင့် ဝိညာဉ်အနားယူပါ။ တစ်နေ့တာလုံး စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေမည့် စိတ်အာရုံတည်မှု ရှိ အစွမ်းထက်တရားအားထုတ်ကိရိယာများကို ရှာဖွေပါ။ တစ်နေ့တာကို တိတ်ဆိတ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ပြီး ဂီတအေးနှင့် သင့်စိတ်အနားယူကာ ပုံပြင်အကြောင်းအရာများနှင့် အိပ်ပျော်စေပါ။.
* အချို့သောအကြောင်းအရာသည် ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များကို ကျသင့်စေနိုင်ပြီး Calm အကောင့် လော့အင်ဝင်မှုကို လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး က ရာသီစက်ဝန်းခြေရာခံခြင်း၊ နှီးနွယ် ရောဂါလက္ခဏာစီမံခြင်းနှင့် Glow သင့်အဖော်မှတဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အတွင်းသဘောနှင့် အကြောင်းအရာများတွင် အသုံးကျသည့် အကူအညီပေးပါသည်။ The Galaxy နှင့် အခြားသင့်လျော်သောဝတ်ဆင်စရာများက ယခုတွင် ကျွန်တော်တို့ချစ်သော အမျိုးသမီးများကို သူတို့လှမ်းသော ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် ကူညီရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Samsung Health ကိုအသုံးပြုရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ
သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် ပမာဏများ
သင့်ရဲ့ Galaxy Watch ကို အသင့်ပြင်ထားပါ
တိုင်းတာမှုမလုပ်မီ သင့်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Galaxy Watch ကိုပတ်ထားပြီး သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်သတ်မှတ်ထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော တိုင်းတာမှုအတွက်၊ ဖော်ပြပါအခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာခြင်းကို အကြံပြုထောက်ခံပါသည်။
. သင်၏တိုင်းတာမှုကို နေ့စဉ် တူညီသောအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ပါ။ (နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းတာခြင်းကို အကြံပြုထောက်ခံပါသည်။)
. အစာမစားထားချိန်တွင် တိုင်းတာပါ။
. သန့်စင်ခန်းသုံးပြီးချိန်တွင် တိုင်းတာပါ။
. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချွေးထုတ်ခန်းသွားခြင်းကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်စေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များမလုပ်မီ တိုင်းတာပါ။
. ဆွဲကြိုးများကဲ့သို့သော သတ္တုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်တွင် တိုင်းတာပါ။
. ဓမ္မတာလာနေစဉ် တိုင်းတာခြင်းမပြုပါနှင့်။
1. သင်၏ Galaxy Watch ကိုပတ်ထားသောလက်ကို မြှောက်လိုက်ပါ၊ သင်၏လက်မောင်းများနှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ််၏ ကျန်သောအစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် လုံလောက်သောနေရာလွတ်ရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
2. သင်၏လက်ချောင်းများဖြင့် သင့် Galaxy Watch ပေါ်ရှိ လျှပ်ခေါင်းနှစ်ခုကို တို့ထိပါ။
3. ထိုသို့လုပ်နေချိန်တွင်၊ သင့်လက်ချောင်းများသည် သင်၏လက်ကောက်ဝတ်ကို ထိမနေကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။
* Galaxy Watch4 စီးရီးများတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
* သင်သည် နှလုံးခုန်စက်ထည့်သွင်းထားပါက သို့မဟုတ် အခြားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းထားပါက တိုင်းတာခြင်းမပြုပါနှင့်။
* ကိုယ်ဝန်ရှိနေပါက တိုင်းတာခြင်းမပြုပါနှင့်။
* သင်သည် အသက် 20 အောက်ဖြစ်ပါက တိုင်းတာမှုရလဒ်များသည် မတိကျနိုင်ပါ။
စစ်ဆေးမှု ပြီးစီးသည်အထိ သင်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ထိန်းထားပါ။
တိုင်းတာမှုပြီးစီးသည့်အခါ၊ သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ ရလဒ်များကို စစ်ဆေးပါ။ သင့်ဖုန်းပေါ်တွင် သင်၏ဒေတာများရှိ အပြောင်းအလဲများကို ခြေရာခံနိုင်ပါသည်။
သင့်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Galaxy Watch ကို ပတ်ကာ သင့်နာရီပေါ်ရှိ Samsung Health အက်ပ် > ဆက်တင် > တိုင်းတာမှု > အိပ်စက်နေစဉ် သွေးတွင်းအောက်စီဂျင် > ဖွင့်သို့ သွားပါ။
သင့်မိုဘိုင်းတွင် Samsung Health > အိပ်စက်မှု > နောက်ထပ် ရွေးစရာများ > အိပ်နေစဉ် သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် > ဖွင့်သို့ သွားပါ။
သင်၏ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ပမာဏများကို တိုင်းတာပါ
Galaxy Watch သည် သင်အိပ်ပျော်နေခြင်းရှိ မရှိ စူးစမ်းပြီး အိပ်ပျော်နေစဉ် သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ပမာဏများကို အလိုအလျောက်တိုင်းတာပါသည်။ တိကျသောတိုင်းတာမှုအတွက်၊ နာရီ၏ အနောက်ဘက်ရှိ အာရုံခံကိရိယာသည် သင်၏အရေပြားနှင့် အံကိုက်ကွက်တိထိစပ်နေစေရန် နာရီကို လက်ဖျံရိုးအထက်2မှ3cm တွင် ဝတ်ဆင်ပါ။
‘အိပ်စက်ခြင်း’ အောက်တွင် သင်၏ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ပမာဏ တိုင်းတာမှုများကို စစ်ဆေးပါ။
သင့်မိုဘိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် Galaxy Watch ကို ဝတ်ပါ။ သင့်မိုဘိုင်းတွင် Samsung Health > အိပ်စက်မှု > နောက်ထပ် ရွေးစရာများ > ဟောက်သံ ထောက်လှမ်းမှု > “အမြဲ” သို့မဟုတ် “တစ်ကြိမ်" သတ်မှတ်မည်သို့ သွားပါ။
ㆍအမြဲ- အိပ်ရာမဝင်မီ သင့်ဖုန်းကို အားသွင်းစက်တွင် ပလပ်တပ်ပါ။
ㆍတစ်ကြိမ်- အိပ်စက်မှု တိုင်းတာခြင်း ပြီးသည့်နောက်ရက် နောက်တစ်နေ့တွင် ဆက်တင်များက အလိုအလျောက် ပိတ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် နေ့စဉ် အိပ်ရာမဝင်မီ ဟောက်သံ ထောက်လှမ်းမှုကို သေချာ ဖွင့်ထားပေးပါ။
သင်အိပ်ပျော်နေစဥ် ဟောက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ
သင့်ရဲ့ ဟောက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊ သင်အိပ်စက်နေစဉ်တွင် သင်၏ Galaxy Watch ကို ပတ်ထားရပါမည်။
သင်အိပ်စက်နေသည်ကို နာရီက လေ့လာသိရှိပြီးနောက် သင့်ရဲ့ဖုန်းတွင် မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့် အသံသွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားသည့်အခါ ဟောက်သည့်အသံများကို အသံသွင်းထားပါလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်၊ သင်၏ဖုန်းကို သင့်ဦးခေါင်းအနီးရှိ ပြန့်ပြူးသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထားရှိပါ။
‘အိပ်စက်ခြင်း’ တွင် တိုင်းတာမှုရလဒ်များနှင့် အသံသွင်းထားသောဖိုင်များကို စစ်ဆေးပါ။
Samsung Knox ဖြင့် ဒေတာလုံခြုံမှု
သင့်ကျန်းမာရေးအချက်အလက်ကို Samsung Knox ဖြင့် လုံခြုံစွာ သိမ်းထားသည်။
* ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အသုံးပြုသူ ကြားခံသွင်ပြင်စနစ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးကို ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ရရှိနိုင်မှုသည် နိုင်ငံ/ဒေသ၊ စက်မော်ဒယ်နှင့် OS ဗားရှင်းတို့အရ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးနောက် ငွေပေးချေရသောဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
* သရုပ်ပြခြင်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရုပ်ပုံများကို အသွင်တူအောင် ဖန်တီးထားပါသည်။